အောင်ဒင် – အပိုင်း (၆၈) လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး | MoeMaKa Burmese News & Media
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှာ ၂၀၃၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၂၂)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၆၈)
အောင်ဒင်၊ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၄
အပိုင်း (၆၈) လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများက တဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထဲ ရောက်ရှိလာတဲ့ အချိန်ကစလို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဏများကို မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ထဲရောက်ရှိလာတာကို အကြီးအကျယ်ကျေနပ်မှုရှိတဲ့ အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို အားပေးကူညီခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မီတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျော်မြင့် (နအဖခေတ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်း) ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဓိကစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုက နှစ်တစ်ရာကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို အကြီးစား ပြင်ဆင်မွမ်းမံရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ ရလာဒ်အဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က “ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကော်မီတီ” ကို ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကော်မီတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီး လွှတ်တော်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မီတီဝင်များ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်များ၊ အငြိမ်းစား ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များက ကော်မီတီဝင်များအဖြစ် ပါဝင်ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ၁၈၉၉ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရက တည်ဆောက်ခဲ့တာမို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သက်တမ်း ၁၁၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ စတင်တည်ဆောက်တုံးက ကုတင် ၃၄၂ လုံးသာ ဆန့်ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ကုတင် ၅၄၆ လုံးဆန့်အောင် တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ကုတင် ၁၅၀၀ ဆန့် အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ သူနာပြုတက္ကသိုလ်နဲ့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှုတက္ကသိုလ်များရဲ့ သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်ချဲ့လက်အောက်ခံကာလ၊ ဖက်ဆစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အဟုန်အမြင့်မားဆုံးကာလ၊ တစ်ပါတီစနစ်နဲ့ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကာလတွေကို မြန်မာပြည်သူများနဲ့ အတူဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေအများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများနဲ့ လူထုသပိတ်အဖွဲ့များစုဝေးရာနေရာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမဆုံးလူထုတရားဟောပွဲကျင်းပရာနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သမိုင်းတန်ဘိုးကြီးမားတဲ့၊ ခေတ်အဆက်ဆက် ပြည်သူလူထုကို အကျိုးပြုတဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမယ်ဆိုတာ အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကြီးမားပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့ထုတ် ဧရာဝတီသတင်းဋ္ဌာနရဲ့ သတင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ထောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းရဲ့ ပြောကြားချက်များကို ဒီလိုဖော်ပြပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဝင်းထဲက သူနာပြုတက္ကသိုလ်အနီးမှာ ကုတင် ၁၀၀၀ ဆန့် ဆေးရုံသစ်ကြီးတစ်ခုကို အရင်တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆေးရုံသစ်ကြီး တည်ဆောက်ပြီးစီးမှပဲ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ လက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့ လူနာတွေ၊ ဋ္ဌာနတွေ၊ သင်တန်းခန်းမတွေကို ဆေးရုံသစ်ကြီးဆီ ရွှေ့ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီရွှေ့ပြောင်းနေရာချမှုပြီးမှပဲ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ပြုပြင်၊ မွမ်းမံ၊ အဆင့်မြှင့်လုပ်ငန်း စနိုင်မှာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးသလို ကုန်ကျစားရိတ်ကလည်း အလွန်များပြားမှာပါ၊ ကုတင် ၁၀၀၀ ဆန့် ဆေးရုံသစ်ကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်တာတင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကျော်ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။ ဆေးရုံဟောင်းက လူနာတွေကို ဆေးရုံသစ်ဆီရွှေ့ပြောင်းတာ၊ ဆေးရုံဟောင်းကြီးကို ပြုပြင်မွမ်းမံတာတွေပေါင်းလိုက်ရင် စုစုပေါင်းကုန်ကျစားရိတ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း တစ်ထောင်လောက်တောင် ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆေးရုံပြုပြင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ခွဲဝေပေးတဲ့ ဘတ်ဂျက်က ကျပ်သန်းပေါင်း ငါးထောင် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅သန်း ၂ သိန်းကျော်) ပဲ ရှိပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ငွေကို ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ ပြည်ပအလှူရှင်များထံက တောင်းခံရမှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ကော်မီတီကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဖွဲ့စည်းပြီး ဒီကနေ့ အချိန်ကာလ တစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ မစနိုင်သေးပါ။ ကုတင် ၁၀၀၀ ဆန့်ဆေးရုံသစ်ကြီးကို ၈လနဲ့ တစ်နှစ်အတွင်း ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်မယ်လို့ ဆိုပေမည့် လိုအပ်တဲ့ ပိုက်ဆံမရှိသေးလို့ ပိုက်ဆံရှာဖွေတဲ့အလုပ်ပဲ လုပ်နေရပါတယ်။ အဲဒီလို ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်ဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA)၊ ဗြိတိသျှအစိုးရစတဲ့ အလှူရှင်များနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တည်ထောင်ထားပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အခြေစိုက်တဲ့ “စု ဖောင်ဒေးရှင်း” ကလည်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ပြင်ဆင်မွမ်းမံရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန် (UK Prime Minister David Cameron) ၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွင်းဝန် ဂျပ်စတင်ဂရီးနင်း (International Development Secretary Justin Greening) တို့နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်က ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရေးအတွက် အသေးစိတ်စီမံကိန်းတွေကို လေ့လာသုံးသပ်အကြံပေးမည့် ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ထောက်ပံ့ကူညီမယ်လို့ ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းရာပေါင်းများစွာ ကုန်ကျမည့် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် နိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့တွေ အပြည့်အဝရဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဆေးရုံသစ်ကြီးတစ်ခုဆောက်ပြီးမှ ဆေးရုံဟောင်းက လူနာတွေကို ရွှေ့ပြောင်းပြီး ဆေးရုံဟောင်းကြီးကို ပြုပြင်မည့်အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၅) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ “ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကော်မီတီ” အစည်းအဝေးမှာ ဆေးရုံသစ်ကြီး တည်ဆောက်ရေး မပြောကြတော့ပါ။ အစည်းအဝေးကို ကော်မီတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မီတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျော်မြင့်၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ လက်ရှိဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ ဆေးရုံအုပ်ဟောင်းကြီးများ၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဋ္ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးဋ္ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ တက်ရောက်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင် မတက်ရောက်ပါ။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကနေ ပြည်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ အရင် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရုံးအဆောက်အအုံကို ဆေးရုံအဖြစ် မွမ်းမံပြင်ဆင်နေတာ လုပ်ငန်းများပြီးဆုံးပြီဖြစ်လို့ မကြာခင်မှာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက ဋ္ဌာနအချို့ စတင်ရွှေ့ပြောင်းတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်ချိန်တုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို အစိုးရက ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပေမည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အကြား ဆက်ဆံရေးမပြေလည်ကြတော့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အစိုးရက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မလုပ်တော့ပါ။ အရင်တုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကော်မီတီအစည်းအဝေးတွေကို ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးဝန်ကြီး (သို့မဟုတ်) ဝန်ကြီးရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေမည့် အခုတော့ မပါဝင်တော့ပါ။ ဒါ့အပြင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အလားတူကော်မီတီတစ်ရပ်ကို အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ မကြာခင်က ထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့ “ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကော်မီတီ” အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၅) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြီး (၁၃) ရက်အကြာ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကနေ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၃၄/၂၀၁၄ နဲ့ “ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တိုးချဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံပြင်ဆင်ရေးကော်မီတီ” ဖွဲ့စည်းကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကော်မီတီမှာ ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်က အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (၆) ပါး (သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ၃၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ၅၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ၆၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ ဘဏ္ဏာရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး) နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေတို့က အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သမ္မတက ယင်းကော်မီတီကို လိုအပ်သည့် ဆပ်ကော်မီတီများဖွဲ့စည်းပြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တိုးချဲ့၊ ပြုပြင်၊ မွမ်းမံ၊ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဏာငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပစေတနာရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အလှူငွေများဖြင့်လည်းကောင်း အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အာဏာအပ်နှင်းပါတယ်။ အမိန့်ကြော်ငြာစာမှာပါဝင်တဲ့ ကော်မီတီဖွဲ့စည်းရခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြချက်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီလို ဖော်ပြပါတယ်။
“၁။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က “ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကော်မီတီ” ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ အကူအညီအထောက်အပံ့ရရှိရေး စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ ပြည်သူများ အားကိုးအားထားပြုနေရသည့် ဆေးရုံကြီးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဆေးရုံသက်တမ်း နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်လာပြီ ဖြစ်၍ အချို့အဆောက်အအုံများမှာ ပြိုကျပျက်စီးနိုင်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သဖြင့် အလျင်အမြန်ပြုပြင်မွမ်းမံရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ချက်ချင်းအလျင်အမြန်ပြုပြင်မွမ်းမံရမည့် အဆောက်အဦများအား နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဏာငွေဖြင့် အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရန် “”ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တိုးချဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံပြင်ဆင်ရေးကော်မီတီ” ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။”
သမ္မတရဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းတဲ့ ကော်မီတီက ပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့ အကူအညီအထောက်အပံ့များရရှိရေး စောင့်ဆိုင်းနေချိန်မှာ အရေးပေါ်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အမြန်ဆုံးဆောင်နိုင်ဖို့ အစိုးရကော်မီတီကို ဖွဲ့စည်းရတယ်လို့ ဆိုပေမည့် လွှတ်တော်ကော်မီတီနဲ့ အစိုးရကော်မီတီ နှစ်ခုအကြား ဘယ်လို ပတ်သက်၊ ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို ရှင်းမပြပါ။ အခုဆို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပြင်ဆင်မွန်းမံဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကော်မီတီ နှစ်ခု တပြိုင်တည်း တည်ရှိနေပါပြီ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကော်မီတီကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပြီး အစိုးရကော်မီတီကို ဒုသမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်း ဦးဆောင်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ပြုပြင်မွမ်းမံရေးအတွက် အလေးအနက် ဆောင်ရွက်နေကြတာ သာမာန်အားဖြင့် ဝမ်းသာစရာကောင်းပေမည့် ဒီကော်မီတီ နှစ်ရပ်ဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်အားပေးအားဖြည့်ခြင်းမပြုပဲ တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက် အားပြိုင်ဖို့၊ လွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားနေကြမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။
#ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြေအောက်ထပ်၊အချုပ်ဆောင်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။
ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီ၊ မြေအောက်ထပ်မှာ အချုပ်ဆောင် (Guard Ward) ရှိပါတယ်။ အင်းစိန်ထောင်အပါအဝင် အကျဉ်းထောင်ကြီးများက အကျဉ်းသားတွေ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးဝါးလို့ ထောင်တွင်းဆရာဝန်၊ ဒေသဆိုင်ရာဆေးရုံတွေက မကုသနိုင်တော့လို့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ဆေးဝါးကုသဖို့ လွှဲပြောင်းပို့လိုက်တဲ့ အကျဉ်းသားများကို ဆေးရုံတက်စဉ်မှာ ထားတဲ့ အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းသားလူနာများကို အခြား အရပ်သားလူနာများနဲ့ အတူတူမထားပဲ သီးခြားခွဲထုတ်ပြီး လုံခြုံရေးအစောင့်အရှောက်တွေနဲ့ ထားရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချုပ်ဆောင်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်းများစွာ ကာလတစ်ခုဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပြီး အချို့လည်း အဲဒီအချုပ်ဆောင်မှာပဲ ကွယ်လွန်သေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃) ရက်၊ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းမှာ လုံထိန်းရဲများရဲ့ သေနပ်ကျည်ဆံထိမှန်ခဲ့ကြတဲ့ ကိုစိုးနိုင်နဲ့ ကိုမြင့်ဦး တို့ကို သွေးအလိမ်းလိမ်း၊ အပြင်းအထန်ဒါဏ်ရာတွေရှိနေတာတောင်မှ အာဏာပိုင်တွေက အချုပ်ဆောင်မှာ လူနာကုတင်နဲ့ ခြေထောက် သံကြိုးတွဲသော့ခတ်ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီနေရာမှာပဲ ကိုစိုးနိုင် ကျဆုံးခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ရာပေါင်းများစွာဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ဂလဲ့စားချေမှုကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အချုပ်ဆောင်မှာ ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ “ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြေအောက်ထပ်၊ အချုပ်ဆောင်” ဟာ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို နှစ်ပေါင်းများစွာ လှစ်လျူရှုခံခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်က ကော်မီတီများဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်နေကြရာမှာ မြေအောက်ထပ်၊ အချုပ်ဆောင်ကို သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုအဖြစ် အရှိအတိုင်း ထိန်းသိမ်းဖို့၊ ပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ ကျနော်တောင်းဆိုပါတယ်။ တောင်အာဖရိကမှာ နယ်လဆင်မန်ဒဲလား အကျဉ်းကျခဲ့တဲ့ ရော်ဘင်ကျွန်းအကျဉ်းထောင်ကို ပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသလို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြေအောက်ထပ်၊ အချုပ်ဆောင်ကိုလည်း မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့ အမှတ်တရပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေချင်ပါတယ်။ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာလည်း “အချုပ်ဆောင်” ဆိုတာ မရှိစေချင်တော့ပါ။
2 Responses to အောင်ဒင် – အပိုင်း (၆၈) လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး
Catwoman on July 8, 2014 at 7:52 am
You can’t just buildahospital you need competent workers and equipment as well as medicines
Zaw Aung on July 9, 2014 at 7:18 am
interesting story. DASSK should be stopped doing this. health and education, construction of hospital is not important now. As I visited Rangoon Hospital, patients who can pay money are transferred to private hospitals and operated. Doctor, Nurse and staffs life of education and health is not easy in Burma.